तिथि मेरो पत्रु » कुकुर वाकर
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 24 2020 | 10 मिनेट पढ्न
नीना दानियल हेर्न थियो. त्यो आफ्नो सिङ द्वारा बैल लिन लाग्नुभएको थियो, वा बढी भन्नु उपयुक्त, आफ्नो leashes गरेर कुकुर, र आफ्नो पूर्ण ध्यान प्राप्त, उनले आफु को कुल मूर्ख बनाउन भए पनि, थियो जो, सबै भन्दा विश्वासपूर्वक, अपरिहार्य.
त्यसैले त्यो एक विशेष कुकुर-पैदल घटना योजना. आज, बरु त्यो सामान्यतया गरे बाटो यसलाई मिश्रण, सबै प्रकार को कुकुर संग, त्यो एक सानो सेतो Yuppie-कुकुर उत्सव आयोजना गर्ने प्रबन्ध मिलाए. यो उनको तालिका केही करतब र Suki केही finagling लिए, त्यो जसको ग्राहकहरु कुकुर संख्या देखि थाह अर्को कुकुर walker को cutesy को कुकुर हुन देखिन्थ्यो, त्यो उनको लागि भर्न अन्तिम मिनेट लहर मा हवाई गए र नीना सोधे जब सानो विविधता र जो कि समय देखि नीना पुर्ण.
नीना तिनीहरूले असामान्य निशान थियो जब सम्म यी कुकुर भिन्नता बताउन कहिल्यै सक्छ, स्टेला गरेको हराएको बायाँ कान जस्तै, वा आफ्नो बायाँ हिप मा Jedi गरेको bald टालो. उनको लागि, तिनीहरूले सबै साना सफेद कुकुर थिए, Cockapoos बाहेक, जो धेरै प्यारा छ र स्मार्ट थिए, तर तपाईं mutts देखि अरू के आशा गर्छन्, Cockapoos साँच्चै के छ जो. शुद्ध नस्ल सानो सेतो कुकुर प्यारा सामान तिनीहरूलाई सोच्न गर्ने बेवकूफ स्वामित्व गर्छन, तिनीहरूले साना छौं र तपाईं एक हवाई जहाज वा एक रेस्टुराँमा तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ किनभने. (त्यो थिएन, तथापि, यो hypo-allergenic थियो किनभने एक स्वामित्व गर्नेहरूलाई न्याय. त्यो एक चिकित्सा कारण थियो, मात्र स्वीकार्य कारण यस्तो कुकुर आफु।)
तर एक सानो सेतो कुकुर को कुनै पनि मालिक खरोंच र तपाईं आफ्नो नस्ल विशेष र अनौठो छ भन्ने विश्वास गर्ने एक मानसिक आमा फेला छौँ, र फरक संग तपाईं जन्माई, विस्तार, एक Bichon र एक माल्टाका बीच, जो बारेमा, पाठ्यक्रम, नीना बकवास दिन सक्छ.
तर, नेत्रहीन बोल्ने, एक पैक रूपमा, तिनीहरूले एक दृष्टि थिए. त्यो जलाशय तिनीहरूलाई लिएका थिए, तिनीहरूले दानियल चलान चाहन्छु आशा. उनी हरेक बिहान भाग्यो थाह थियो र बस बाटो गए. यो भीड थियो यो बिहान, पनि त्यो कुकुर को लागि प्रयोग गर्ने घोडा बाटोमा. सबैजना उसलाई देख थियो, हँसिला, देखाइरहेको, यो आराध्य दृष्टि मा. तर परमेश्वरले त्यो बार मा टहलना निशान माथि प्रयोग निषेध. यो कुकुर आउँदा Joggers मतलब motherfuckers थिए, बच्चा strollers, वकर वा व्हीलचेयर, र त्यो यस बिहान भनेर बहस गर्न ऊर्जा थिएन, विशेष गरी उनको हत्या गरियो जो यी प्यारा नयाँ जुत्ता लगाएका.
तिनीहरूले जलाशय दक्षिणी टिप मा सुरुङ जति जति नजिक पुग्दैगए, एक परिचित कुकुर अन्धकारमा बाहिर चल्यो. यो सिड थियो. ओह Shit, नीना लाग्यो, त्यो उनको लागि सीधा घेरिएको रूपमा, यहाँ त्यो आउछ. सिड थियो जहाँ लागि, दानियल थियो. अनि उनको मन एक सय एक दोस्रो thumps कुटपिट गर्न थाले, र एक सहज मुस्कान उनको अनुहार मा आफ्नो बाटो फेला, उनको हात उनको कपाल चिकनी गए रूपमा, र त्यसपछि उनको शर्ट तल पुल, उनको अनुहार देखि पसिना पुछ्नु.
त्यसपछि त्यो उसलाई देखे. एक टी-शर्ट र शर्ट्स मा, उहाँले जस्तै कपाल बस ओछ्यानमा बाहिर लुढकाया थियो, आफ्नो बायाँ हात मा हेडफोन र एक एमपी3प्लेयर संग टहलना, संगीत मा स्पष्ट उहाँको मन. उहाँले तिनलाई देखेर बिना उनको तिर भाग्यो.
उहाँले गर्नुभयो सम्म. अनि त, एक मुस्कान आफ्नो अनुहार भर मच्चियो, आफ्नो आँखा crinkle बनाउने, गाला डिंपल. त्यो सम्झना गर्न गाह्रो थियो. त्यो एघार सानो सेतो कुकुर घेरिएको थियो, कस्तो प्रकारको मान्छे बोक्न गर्छन र coddle. उनले उत्तरका राम्रो डायन जस्तै देख्यो, bichons सट्टा munchkins घेरिएको. अनि त्यो सट्टा सदाझैं शर्ट्स को एक धेरै नै कम स्कर्ट र सट्टा बेइमान टी-शर्ट र भगवान असहज जुत्ता सट्टा उनको जूता को सदाझैं च्यातिएको विश्वविद्यालय को तार peasanty ब्लाउज एक किसिमको लगाएको थियो.
“दानियल!” त्यो उहाँलाई लहराया.
उहाँले आफ्नो तिर लाग्यौं, त्यो क्षण मा त्यो कहीं पनि गइरहेका छैनन् थियो किनभने. ती साना कुकुर साँच्चै वरिपरि सर्कल चलिरहेको थियो. शायद त्यो गिर चाहन्छु (त्यो चोट आशा थियो छैन कि) र त्यो उनको टिप्न छ चाहन्छु (तर यो खराब हुने थिएन).
“नीना अरे।” अनि इच्छा गरेर भने, गम्भीर भए, लगभग कठोर. त्यो राम्रो थाहा थिएन भने, उनी नाराज थियो सोचे छु हुनेछ. उहाँले थाह थियो उनले छैन गर्नुपर्छ ठाउँमा आफ्नो घर मा भएको थियो? त्यो उनको नजिक, उहाँले आफ्नो हेडफोन कस्यो, तिनीहरूलाई आफ्नो घाँटी वरिपरि बस्नेहरू दिँदै. उहाँले एमपी3प्लेयर बन्द क्लिक.
“आफ्नो प्रतिवेश जस्तै. तपाईं त्यहाँ के छ, दस bichon फ्रीज?” दानियल सोधे. उहाँले मुस्कुराउँदै, उहाँले सकेजति त्यो उसलाई रूपमा नजिक गयो, वरपरका सेना दिइएको.
“म प्रभावित छु. तर वास्तवमा, म यहाँ एक bichon छ, यहाँ यो एक, स्टार. त्यो Zardoz छ, एक bichon / yorkie मिश्रण, त्यहाँ चट्टान मा peeing मा. म दुई ची-poos छ, शमू र डेव, त्यहाँ सानो गुलाबी धनुष संग, व्यञ्जन, यो cockapoo, जैकी हे. र जोन एफ, दुई कपास Tulears. साथै, एनी, यो लाहासा apso, नरक देखि कुकुर. तपाईं के ठेगाना? त्यो घर मा छ जब त्यो एक doggie डायपर पहिरनलाई. ठट्टा होइन. अनि ती तीन malteses? त्यो लैरी छ, कुर्ली र मो. एघार yuppie सबै एक पंक्ति मा कुकुर।”
“तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ कसरी? कसले कसलाई छ, म अर्थ. तिनीहरू सबै मलाई उस्तै देखिन्छन्।”
“तपाईं doggist! अनि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र को ësome भन्नुहुन्न are'Ö”
उहाँले हाँसे, उहाँले तल हेर्दा. उनको Toenails एक बेहोश गुलाबी चित्रित थिए र उनको खुट्टा एक सानो gnarly र arched थिए यद्यपि, त्यो biker-केटी-संग-कुकुर को सदाझैं नजर तुलना नाजुक र प्यारा थियो. उहाँले राम्रो मनपर्थ्यो हेर्न जो उहाँले पक्का थिएन.
नीना त छक्क र खुसी थियो, त्यो मुश्किल आफु समावेश सक्छ. “तपाईं याद. म अर्थ–“
“कुनै विश्वविद्यालय टी-शर्ट।”
यो काम, नीना आफु विचार. त्यो उनको leashes मा एक tug महसुस. 'सबैलाई रहन. सिर्फ एक मिनेट रहन, कृपया।”
“तपाईं राम्रो खोज्छन्।”
नीना दानियल फिर्ता माथि त उनको औंला मा हेरिन्थ्यो. “धन्यवाद. त्यसैले तपाईं के. म meanÖ”
“तर यो ती जुत्ता हिंड्न गाह्रो हुन मिल्यो गर्नुपर्छ।” उहाँले आफ्नो strappy जुत्ता र त्यसपछि उनको खुला खुट्टा मा र त्यसपछि उनको आँखा मा उनको खुट्टा मा देख्यो. त्यो उसलाई देख्न देखेका थिए, र उहाँले अँगाली.
“खैर, म राम्रो यी कुकुर हिंडे र घर भेटिन्छ।” त्यो एक कुल समातिरहेको थियो? किन त्यो उनको काम को उहाँलाई सम्झाउन गरे? यो घटना को उद्देश्य उनको रूपमा उनको विचार उहाँलाई प्राप्त थिएन.
“यो सही हो. तपाईं काम गरिरहेका छौं।”
त्यो हटाइयो. त्यसैले त्यो खुल्छन् र त्यो संग गए.
“म पछि सिड उठाएर छु, सही?”
उहाँले रोक्ने. “म एक बैठक. त्यसैले, धन्यवाद।”
“पक्का, यो मेरो काम हो।” मलाई सिड टिप्न दिनु तपाईं तिर्न चाहन्छु.
त्यसपछि दानियल भने, “यो अचम्मको छ कि यी कुकुर जस्तै मान्छे. तिनीहरूले प्यारा छौं, तर तिनीहरूले ल्याउन छैन. तिनीहरूले गुडिया भएको जस्तै छौं।”
“हाँ, राम्रो, मानिस बिरामी छन्,” नीना भने.
उहाँ माथि सोझो र देख्यो उनको. “ती हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, करीब उनको हेर्न प्रयास भने आफ्नो आँखा squinted रूपमा. “तिनीहरूले अपराधले।”
ऊ झस्किन्छे थियो. “तिनीहरूले यात्रा,” उनले भने, defensively.
“ओह तिनीहरूले के?” त्यो उनको दंग, श्री मा उहाँलाई सोच. Chandler गरेको, आफ्नो कम्प्युटर मा उनको नाम को.
“तिनीहरूले झूट,” नीना भने, किन सोचिरहेका उहाँले, एक वकील, श्रीमती छानबिन हुनेछ. पहिलो स्थानमा Chandler.
“तिनीहरूले मानिसहरूलाई गोपनीयता आक्रमण।”
“ठ्याक्कै,” नीना सहमत.
तिनीहरू एकअर्कालाई आँखाहरु. कुकुर भयातुर रही थिए. एनी सिड गरेको बट सूँघने थियो र मो एनी गरेको बट सूँघने थियो तर सिड हुनुमा कसैको बट सूँघने मा कुनै चासो थिएन. उहाँले बस सकेसम्म चाँडो दूर यी साना सफेद ratdogs देखि नरक प्राप्त गर्न चाहन्थे.
“तपाईं राम्रो जाने,” नीना भने. “सिड पनि खुसी देखिँदैन।”
सिड आफ्नो दाँत वहन र growling थियो, आफ्नो hackles माथि, एक ठप्प मा आफ्नो पुच्छर.
“तिनले राम्रो छ. मलाई हिंड्न,” दानियल भने. “चलो।”
“चलो!” उहाँले अडिग थिए.
र त्यसैले तिनीहरू हिंडे, यो दर्जन कुकुर साथ जलाशय वरिपरि, आफ्नो बाहिर हातले सिड धारण दानियल.
“मलाई बताएँ,” उहाँले भन्नुभयो. “किन तपाईं कुकुर हिंड्न गर्छन्?”
“किन छैन? म के गर्नुपर्छ? एक वास्तविक काम? तपाईं के मतलब छ?”
उहाँले आफ्नो defensivness उपेक्षा. “खैर, तपाईं सधैं एक कुकुर walker भएको छ?”
“किन, एक कुकुर walker हुनुको गलत?” किन हरेक कि कुकुर पैदल तपाईं चाहनुहुन्छ के मा असफल गरिरहेको बेला तिमी के छ मान गरे.
“के छैन, म”उत्सुक बस m. कि ठीक छैन?”
“बस को बारे मा एक वर्ष को लागि. माफ गर्नुहोस्. मेरो मित्र, स्पष्ट, L.A जाने थियो. अस्थायी रूपमा, त्यसैले म उनको लागि शासन गर्न थाले, अस्थायी रूपमा.
“त्यसैले अस्थायी छैन, यस वर्ष लामो काम. तपाईं कहाँ पहिले देखि काम गर्नुभयो?”
“अनियमित घर. Copywriter।”
“तपाईं यस को लागि यसलाई दिनुभयो?”
“माथि दिन धेरै थिएन. मेरो आमा को लागि बाहेक. म उनको डींग मारने को अधिकार लगे।”
“तपाईं एक भयानक छोरी हुनुहुन्छ।”
उनी ठट्टा वा थिएन भने पत्ता लगाउन उहाँलाई हेर्न थियो. उहाँले थियो. त्यो उहाँलाई फिर्ता मुस्कुराउँदै.
“तपाईं केही राम्रो पैसा बनाउनु पर्छ. विचार म तपाईं के वेतन, र कति त्यस वृद्धि? तपाईं कुकुर धेरै भयो, सही? अनि यो सबै नगद छ, सही?”
“म ठीक गर्न।”
“एक सबै नगद कारोबार. त्यो कुनै करदाता बिना हुनुपर्छ कुरा हो।”
“अनि के तपाईं बारेमा? तपाईं एक लावा छौं–?” उनी आफै बन्द गर्न खोज्दा तर ढिलो थियो.
उहाँको आँखा पातलो slits बने र उनले मुस्कुराउँदै. “तपाईं यो भन्न सक्छौं. यो एक खराब शब्द छैन. मलाई पछि दोहोर्याउनुहोस्: वकिल. चलो।”
“वकील,” उनले भने र तिनीहरूले दुवै हाँसे.
“तिमी कसरि ठेगाना?” उहाँले सोध्नुभयो, यद्यपि, त्यो थाह तिनले कसरी धेरै राम्रो तरिकाले थाह.
“खैर, एक, म, बस एक अनुमान. तपाईं एक वकील जस्तै हेर्न. सिड एक वकील थियो कुकुर को प्रकारको छ. आफ्नो घर, राम्रो, म यो देखेका छौँ के देखि, एक वकील बाँच्ने थिए ठाउँ को तरिका जस्तै देखिन्छ।”
“तपाईं देखेका छौँ के देखि भनेर वाक्य प्रासंगिक खण्ड छ।”
“तपाईंको भवन भित्रको बराण्डा।”
'मेरो बाथरूम बिर्सन donët, र–“
“त्यो थियो! म देख्न गरे–“
“बाथरूम गर्न भवन भित्रको बराण्डा देखि हलवे, हरे र तपाईं को माध्यम हिंड्न थियो बेडरूम बाथरूम प्राप्त गर्न।”
त्यो उहाँलाई रोक्न थियो. उहाँलाई हटान. “हाँ, यो बाथटब थियो, स्नान र शौचालय. तिनीहरूले मृत giveaways थिए. तिनीहरूले भने 'वकिल’ सबै उनलाई।” उनले फेरि हाँसे. “म बाथरूम बारेमा बिर्सेका थिए।”
“हम्म्. मलाई,” उहाँले हँसिला भने.
अब पूर्व पक्ष माथि र पश्चिम बारी नजिकै, आफ्नो बाटो घर मा खुसीसाथ कुकुर, नीना र दानियल एक पैदल नाली मा खसेको थियो. या त उनलाई कुरा अघि यो मिनेट थियो.
“अनि मेरो ट्रमबोन,” दानियल भने.
“मेरो ट्रमबोन, मैले भने।”
नीना गरेको एक जाज चौकडी मा एक ड्रम जस्तै कुटपिट उनको मन महसुस सक्छ. “तपाईं, एक, खेल ट्रमबोन?”
उहाँले एक मिनेट को लागि उनको देख्यो, र केही भने. त्यसपछि, घन्टा जस्तै लाग्यो पछि, उहाँले सोध्नुभयो, “तपाईं जाज मन?” दानियल सोधे.
“पक्का, हो. म अनुमान।” उनको हृदय बास गर्न पासो देखि गएका थिए. त्यो त उनको बाहिर सोध्न वा उनको पत्ता लाग्नुभएको थियो.
“तपाईं स्लाइड Hampton सुन्न मलाई संग जान मन लाग्छ? उहाँले मोहरा मा छ र एक बलियो ट्रमबोन खेल्छ. तपाईं ट्रमबोन मन, तिमी छैन।”
उहाँले प्रश्न रूपमा यो माग गरे, त्यसैले त्यो जवाफ थिएन. “म स्टार जाज trombonists थिए कुनै विचार थियो।”
“Stellar trombonists छन् तर, कुनै तारा. तुरही, saxes, पाठ्यक्रम, तर trombones आफ्नो कारण मिल्यो कहिल्यै छन्. यस ट्रमबोन को बेवास्ता सिङ छ. पक्का, फ्रान्सेली सिङ शास्त्रीय संगीत छ, tubas marching ब्यान्डको छ, र जताततै पाठ्यक्रम तुरही र saxes को, सबै समय. तर ट्रमबोन? यो बिर्सेका सिङ छ, शांत, soulful, तुरहीको आध्यात्मिक भाइ।”
उनले आफ्नो जोश द्वारा मंत्रमुग्ध थियो.
“त्यसैले, तपाईं एक सुन्न जान चाहनुहुन्छ? वास्तवमा पाँच? Hampton गरेको एक ट्रमबोन Quintet सँगै राखे. यो कुरा हुन गइरहेको गर्नुपर्छ. अनि म तपाईंलाई यस्तो चासो थियो पछि लाग्यो, राम्रो, तपाईं आउन चाहेको हुन सक्छ।”
“खैर, हाँ, पक्का, तर, म वास्तवमा के अर्थ haveÖ”
“आज रात?” त्यो एक मिनेट को लागि लाग्यो र केही सम्झना. त्यो उनको हिप मा आफु मारा. “ओ, के छैन, म आज सक्नुहुन्न।” क्लेयर आ थियो र त्यो एक मान्छे को लागि एक मित्र रद्द कहिल्यै चाहन्छु. यस मान्छे.
“ठीक, कसरी भोलि बारेमा? तिनीहरूले केही दिन भर हुनेछु. पहिलो सेट नौ मा छ. हामी पहिलो खान सक्थे।”
हे परमेश्वर. ओह भगवान. ओह हो! सूर्य बस treetops मा बौरिउठ्नुभएका थियो र त्यो उनको अनुहार मा आफ्नो गर्मी महसुस सक्छ. कुकुर खुसीसाथ ताजा बिहान हावा सूँघने थिए र त्यो राम्रो थाहा थिएन भने, यो जीवन थियो! यो एक सिद्ध सिद्ध बिहान थियो. हेर! हेर्नुहोस्! जीवन एक पल मा उत्तेजित गर्दछ.
“खैर,” सबै त्यो भन्न सक्छ थियो.
तिनीहरूले पूर्व पक्ष पुगेको.
“एक 'राम्रो छ, हो '?”
“खैर, ठीक,” त्यो articulately जवाफ.
“म एक हो लागि भनेर लिन्छु. म तपाईं टिप्न हुनेछ?”
त्यो छिटो सोच्न थियो, यति सामान्य 'मिति जोगिन चाहने’ चुम्बन थिए कि प्रक्रियाहरु, यति कुरा, मृत्युको. “म त्यहाँ तिमीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ?”
“पक्का, यो कहाँ छ, तिमीलाई थाह छ? सातौं र एघारौं, उत्तरतिर, साना ठाउँ. ठीक सात-तीस?”
“सातौं र एघारौं?” त्यो गाउँमा थाह छैन मा अप्ठ्यारोमा संग flushed.
“सातौं Avenue र एघारौं सडक।” उहाँले मुस्कुराउँदै.
उनले निम्न थियो उसलाई देखाउन रोक्ने. “सात-तीस मा,” त्यो दोहोर्याइएको, एक उत्साहित मा, डरलाग्दा, अभिभूत व्यामोह.
“राम्रो. अब म जान मिल्यो. हामीलाई केही जीवित लागि काम, तपाईंलाई थाहा छ।” उहाँले मुस्कुराउँदै, गिज्याइको. “मजाक!” त्यसपछि उसले आफ्नो हातले उनको पाखुरा छोयो. “भोलि तपाईं हेर्नुहोस्, सही? Trombones को एक रात।”
उनी बस छोयो थियो हाजिर छोयो, र भने, “हाँ।” त्यो एक मिति-ओ-मूर्ख भएको थियो, एक मिति-एक-phobe, मिति चुनौती. त्यो मानिसजातिको थाह उच्चतम स्तम्भ मा दानियल संग मिति मारेका थिए, सगरमाथा रूपमा लगभग रूपमा उच्च, र यो त्यहाँ पातलो हावा माथि मा सास गर्न कठिन छ. यो पनि धमकी जीवन हुन सक्छ. एक लापरवाह कदम र तपाईं आफैलाई गिरने पाउन सकेन. प्रेम र / वा आफ्नो मृत्यु.
अनि उहाँले दृष्टि बाहिर चाँडै सिड संग शहर फर्केर चलान गर्न थाले र थियो. तर नीना बारी गर्न पर्याप्त समय थियो, र आफ्नो शर्ट्स मा आफ्नो शरीर कदम हेर्न, आफ्नो पेशी खुट्टा र काँध संग, र मा एक सास लिन र बाहिर गरौं, उनको आँखा बन्द, उसलाई रोकेर चुंबन र देख्ने एन
तर उनको सेतो doggie बटालियन सबै आफ्नो शक्ति संग चेतना उनको फिर्ता झिकेर, र तिनीहरूले आफ्नो बाटो घर मा थिए.
उहाँ हावा जस्तै भाग्यो, उहाँले पहिले नै आफ्नो पांच मील चलान थिएन भने. उहाँले उच्च महसुस, उहाँले शायद जस्तै महसुस के थाह भए तापनि, उहाँले लिन्छन् पछि यो कलेज मा भएको थियो. अनि उहाँले उत्साहित महसुस, उहाँले शायद जस्तै महसुस के थाह भए तापनि, उहाँले आफूलाई महसुस गरौं देखि यति लामो समय भएको थियो. अनि त्यो यस्तो अनौठो महिला, बिली सोच थियो. तर भव्य, त्यहाँ ती सेतो कुकुर संग. उनको बारेमा केहि, उनको बलियो हात, उनको राम्रो आँखा, मा मुख उनको, अप्रत्याशित जोखिम, यो खुलापन, केहि उहाँलाई बाहिर ढकढक्याउन. ओह केटा, यस भइरहेको थिएन, यो थियो? होइन अहिले, छैन दानियल रूपमा, एक सत्य Peeping टम थियो जो यस चरपरा केटी र कर evader संग, बुट गर्न. त्यो त उनको माया बस्छ वा उनको वा दुवै पक्रन छ लाग्नुभएको थियो. अनि happenedóthe अन्तिम समय प्रेम कुरा मा गिरने, यो thingóit गिरफ्तार सबै धेरै नराम्रो समाप्त छैन. अनि त्यो आफूलाई थियो. त्यो सिक्छ सम्म प्रतीक्षा, यो हुन्छ कि यदि सम्म, जसले साँच्चै छ र के उहाँ साँच्चै गर्छ. वकिल पर्याप्त खराब छ. तर एक आईआरएस एजेन्ट? अनुभव उसले पहिल्यै थाह एक महिलालाई आदी सक्ने कुरा हो भनेर थाह थियो, तर यो देखेर छक्क भइरहेको उनले मा प्राप्त कहिल्यै कुरा हो.
उनी दानियलको सोच्छ बस किनभने शायद त्यो उहाँलाई बाहिर जा थियो! उहाँले सोच्नुभएको. फोटो मा दानियल, यो चालाक अपार्टमेन्ट संग, सिद्ध कुकुर?
अनि कसरी त्यो दानियल एक वकील थियो थाह थियो, जे भए पनि? शायद त्यो bigmouth doorman पीट तिनलाई भन्नुभयो. या अरू त्यो दूर दिएको छु भनेर आफ्नो रिपोर्ट वा मेल वा घर मा काम को एक संख्या केही पढेका थिए. राम्रो कुरा उहाँले आफ्नो वास्तविक पेशा र पहिचान लुकाउन त्यसैले सावधान थियो. त्यो कोठरी मा भएको थियो. त्यो ट्रमबोन मामला खोलिएको थियो. उनले आफ्नो मुखपत्र मा उडा थियो. उनले आफ्नो टब नुहाउँथे थियो. कसले यो नीना सक्षम थियो के थाह? त्यो कुनै सीमा थियो?
उहाँले थाह सबै अर्को समय थियो, त्यो उनको साथ बाथटबमा हुन चाहन्थे.
समय नीना कुकुर हिंडे र त्यसपछि उनलाई घर खाएका भए, उनको खुट्टा सात विभिन्न स्थानबाट आक्रान्त थिए. बायाँ मा दायाँ खुट्टाले तीन र चार. त्यो उनको ओछ्यानमा को किनारा मा बसे, त्यो एक समातिरहेको थियो के सोच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड र समूहले एड्स आवेदन गर्दा, शमू कर्तव्यबोधले उनको खुट्टा को तल पाला रूपमा. उहाँले स्नान थाह toóbut हाँ दानियल heróyou'd छैन हेलेन केलर हुन छन् याद गरेका थिए. उहाँले ट्रमबोन थाह.
तर वास्तवमा उनको बाहिर आग्रह गरेको. अनि त्यो के बनाएका थिए. अब यो झटका छैन, त्यो उनको आमाले थिए भने त्यो असाध्यै भने, मिति सङ्केत, होइन ट्रमबोन.
त्यो मा एक गहिरो सास लिएर, आफ्नो musky गन्ध संग आफ्नो कोठरी मा छ कि टी-शर्ट सम्झन प्रयास.
10 महिला लागि डेटिङको आज्ञा